Raga gaagaabka ah Oo dumarka ka helaan waa maxay sababtu ? | shumis.net
Home » galmada » Raga gaagaabka ah Oo dumarka ka helaan waa maxay sababtu ?
Raga gaagaabka ah Oo dumarka ka helaan waa maxay sababtu ?
Dumarka dooqooda waa mid cajiib ah aan laheen sal loogu hagaaga waana wax dabiici ah in aad ku aragto dooqa dumarka in uu marba si yahay, waxaa jiro dooq ay kawada siman yihiin oo ah in aysan jecleen ragga aadka u gaaban.
Big and Mighty oo darasadaan sameesay ayaa xustay in 71% dumarka ay jecel yihiin in ninka ragga dhirirkiisa u dhexeeyo 183 cm ilaa 198 cm, dumarka laga qaaday daraasadaan ayaa carabaabay in ninka markii uu yahay ruux dhiriir leh uu noqon karo ruux ay ku faanaan indhahooda qaban karo, dumarka ayaa ku daran ragga ay guursan doonaan in ay jecel yihiin dhirir ahaan in uu dheeryahay.
Muhiimada ugu wayn ayaa ah in markii ay dumarka heestaan ruux iyaga aad uga dheer in ay dareemayaan ku qanacsanaan iyo farxad, dhanka quruxda iyo labiska ninka dheer aad ayuu uqabtaa indhaha dumarka waana sababaha ugu wayn ay aadka u jecel yihiin dumarka.
Sidoo kale rag ayaa jecel dhirirka gabadha in uu ahaado mid u dhexeeya 170 cm ilaa 178 cm, balsa ragga dood kama qabaan hadii ay helaan gabar aad ugaaban ama jabyar.
Title: Raga gaagaabka ah Oo dumarka ka helaan waa maxay sababtu ?